Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the Kingdom of Bhutan – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Aung Khin Soe, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Bhutan, presented his Credentials to His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the Kingdom of Bhutan on 29 February 2016, in Thimphu.
Dated. 11 March 2016
ဘူတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးအောင်ခင်စိုး သည် ၎င်း၏သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်၀ါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် သင်ဖူးမြို့၌ ဘူတန်နိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ် ဂျင်မီခေဆာ နမ်းဂျဲလ် ၀မ်ချွတ် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်